एपीएफको सहज जित – Chitwan Post
नारायणगढ । भरतपुर गोल्डकप प्रतियोगिताको मंगलबार भएको अन्तिम क्वार्टर फाइनल खेलमा एपीएफ क्लब विजयी भएको छ । एपीएफ क्लबले वीरगन्ज युनाइटेडलाई ३–१ गोल अन्तरले विजयी पछि पार्दै विजयी भएको हो । खेल अवधिर दुवै टिमले राम्रो अवसर पाए पनि गोल भने एपीएफले नै हानेको थियो ।
उक्त खेलको पहिलो हाफमा एपीएफ क्लबका जर्सी नं. ५ का रमेश दंलालले १५औं मिनेटमा हेडिङमार्फत निकै राम्रो गोल गरी आफ्नो टिमलाई अगाडि बढाएका थिए । मध्यान्तरअघि एपीएफ १ गोलले अघि रहेको थियो ।
खेलको दोस्रो हाफमा जर्सी नं. ११ का नवीन लामाले पनि हेडमार्फत नै गोल गर्न सफल भए । वीरगन्ज युनाइटेडले राम्रो प्रदर्शन गरे पनि गोल हान्न असफल रहे । त्यसैगरी एपीएफकै जर्सी नं. ८ का सन्तोष श्रेष्ठले ७० औं मिनेटमा सुट प्रहारबाट अर्को गोल गर्न सफल भए । यो गोलसँगै एपीएफको जीत सुनिश्चित भइसकेको थियो ।
प्रतियोगितामा वीरगन्ज युनाइटेडका जर्सी नं. १२ का पेट्रिकले ७५ औं मिनेट गोल गरी टिमको लागि खाता खोल्न सफल भएका थिए । खेलमा वीरगन्ज युनाइटेडले राम्रो प्रदर्शन गरेका थिए । यो गोलसँगै वीरगन्ज युनाइटेडमा झिनो आशा पलाएको थियो तर सफलता भने चुम्न सकेनन् ।
खेलमा एपीएफका ७७ नं. प्रदीप लामा, जर्सी नं. २८ का राजेन्द्र रावलले पहेँलो कार्ड बेहोरेका थिए भने त्यसैगरी वीरगन्ज युनाइटेडका यकुवले पनि पहेँलो कार्ड भेटे । आज बुधबार भरतपुर गोल्डकप प्रतियोगिताको घरेलु मैदानमा चितवन–११ र संकटा क्लबबीच भिड्ने आयोजकले जनाएको छ ।